China acrylic sheet bunnings vagadziri uye vanotengesa | Gokai
Acrylic, inozivikanwawo seyakanyanya kurapwa plexiglass, chinhu chinotsiva chigadzirwa cheplexiglass. Bhokisi remwenje rakagadzirwa neacrylic rine hunhu hwekutapira kwakanaka kwechiedza, rakachena ruvara, rakapfuma ruvara, rakanaka uye rakatsetseka, tichifunga zvese masikati nehusiku mhedzisiro, hupenyu hwakareba hwebasa uye hapana chinokanganisa kushandiswa. Uye zvakare, acrylic sheet inogona kusanganiswa zvakakwana nealuminium-epurasitiki pepa profiles uye yepamusoro-giredhi screen kudhinda kusangana nezvinodiwa zvemabhizinesi.
Acrylic suction ndiyo yakanakisa fomu yekushambadzira kwekunze kugadzirisa huwandu hwezvitoro zvebhizinesi uye kubatanidza mufananidzo wemabhizinesi. "Acrylic" ishoko rakashandurwa, uye izwi reChirungu ndi ACRYLIC. Icho chigadzirwa chemakemikari. Chemical zita "PMMA" ndezve polyacrylate, inowanzozivikanwa se "yakanyatso kurapwa girazi remagetsi". Mune indasitiri yekushandisa, acrylic mbishi zvigadzirwa zvinowanzoonekwa muchimiro chemagirosa, machira, pombi uye zvichingodaro.
Acrylic ndiko kushandurwa kweacrylic acid uye methacrylic acid makemikari kubva kuChirungu. Kusanganisira monomers, machira, granules, resini uye zvinoumbwa, acrylic mahwendefa akaiswa polymerized kubva methyl methacrylate monomers (MMA), kureva polymethyl methacrylate (PMMA) pepa plexiglass, iyo yakatorwa kubva kuzita rekutengeserana "Oroglas" (a PMMA sheet), uye kubva "Organic Girazi" (ndokuti, plexiglass).
Acrylic Sheet Bunnings inotsiva isina kuremerwa yegirazi ine mhando iri nani uye ine mari. Inopa kukanganisa kwakadzika uye haizoite yero mushure mekuratidzwa kwenguva refu nechiedza chezuva. Iyo inopa kana kakapamhidzira kukanganisa kusagadzikana kupfuura girazi.
♥ Yakanaka mwenje kutumira kusvika 93% ine yakakwira gloss
♥ Yakanaka kuramba kumamiriro ekunze, anti-UV, uye nyore kuchenesa
♥ Yakanaka kugadziriswa, inokodzera michina maitiro uye kupisa-kuumba
♥ Zvakanaka kuramba kurwisa uye chemakemikari ngura
♥ Yakavezwa uye inokodzera kushongedzwa kwepasirese sekumwaya, silkscreen kudhinda, kuputira vacuum, nezvimwe.
♥ Yakanyanya pamusoro pekuomarara sealuminium alloy uye anti-scratch
♥ Yakanaka kugadzikana panguva yemadhigirii makumi mana pazasi pe zero kusvika pamadhigirii makumi mapfumbamwe
MOQ Tani 1 tani kana 50pcs
Kurongedza Nzira Yemukati Package: Kraft bepa kana PE firimu rakafukidzwa pamativi ese
Rokunze Package: Pallet kana yemapuranga kesi
Dhirivhari Zuva Anenge gumi nemashanu mazuva ekushanda mushure mekubhadhara pasi paakaundi yedu
Dhirivhari Chirevo FOB Shanghai kana Ningbo
Mari yekubhadhara T / T, L / C, Paypal
Pashure: anopenya acrylic jira
Zvadaro: acrylic plexiglass
goridhe girazi acrylic sheet